Aprepitant ntụ ntụ (170729-80-3) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Aprepitant ntụ ntụ
Rating: SKU: 170729-80-3. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Predative powder (170729-80-3), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
Akwụsịghị ájá eji ọgwụ ndị ọzọ na ndị okenye na ụmụ 6 ọnwa dị afọ ma ọ bụ karịa iji gbochie ọgbụ na vomiting nke nwere ike ịda n'ime 24 awa mgbe ị natachara ọgwụgwọ chemotherapy. A na-ejikwa ya na ọgwụ ndị ọzọ na ndị okenye na ụmụaka 6 ọnwa dị afọ ma ọ bụ okenye iji gbochie ọgbụgba na vomiting nke nwere ike ime ọtụtụ ụbọchị mgbe ị natara ọgwụ ọgwụ chemotherapy.
Na-enweghị ntụpọ ntụpọ video
Akwụsịghị ájá isi agwa
aha: Akwụsịghị ájá
Usoro Molecular: C23H21F7N4O3
Molekụla arọ: 534.4266624
Ejighị ntụ ntụ mee ihe
Akwụsịghị ájá bụ ọgwụ ndị e ji eme ọgwụ na ndị okenye iji gbochie ọgbụ na vomiting:
gbochie ọgbụ na vomiting nke nwere ike ịda n'ime 24 awa mgbe ị natachara ọgwụgwọ chemotherapy
gbochie igbu oge ọgbụgba na vomiting nke nwere ike ime ọtụtụ ụbọchị mgbe ị natara ọgwụ ọgwụ chemotherapy
gbochie ọgbụ na vomiting kpatara ịwa ahụ
A naghị eji ntụ ntụ eme ihe iji na-emeso ọgbụ na vomiting na ị nwere.
E kwesịghị iji ya mee ihe na-adịgide adịgide ruo ogologo oge.
A maghị ma ọ bụrụ na Aprepitant ntụ ntụ dị mma ma dị irè na ụmụaka.
A pụrụ iji ọgwụ a mee ihe iji mee ihe ndị ọzọ. Jụọ onye dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ maka ozi ndị ọzọ.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ntụ na-adịghị mma
Akpo na-enweghị ntụpọ na-abịa dị ka capsule na dịka nkwusioru mmiri (mmiri mmiri) iji were n'ọnụ. Iji gbochie ọgbụgbọ na vomiting kpatara ọrịa cancer, a na-ewerekarị ntụ ntụ na-emepụta ihe kwa ụbọchị, na-eri ma ọ bụ na-enweghị nri, n'ime ụbọchị ole na ole mbụ nke ọrịa cancer gị. Eleghị anya, ị ga - ewepụ ntụpọ 1 hour tupu ịmịọkọta gị n'ụbọchị 1, 2, na 3 nke ọgwụgwọ gị. Ọ bụrụ na ịnaghị enweta ọgwụgwọ na ụbọchị 2 na 3, mgbe ahụ, ị ​​ga-ewepụ ntụ ntụ na-adịghị mma n'ụbọchị ahụ n'ụtụtụ. Iji gbochie ọgbụ na vomiting kpatara ịwa ahụ, a na-ewerekarị ntụ ntụ dịka otu dose n'ime 3 awa tupu amalite ịwa ahụ. Soro ntuziaka ndị dị na akara aha gị na nlezianya, jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ịkọwa akụkụ ọ bụla ị na-aghọtaghị. Were ntụ ntụ na-enweghị ntụpọ dị ka a gwara ya. Ejila ihe ma ọ bụ na-erughị ya ma ọ bụ buru ya karịa mgbe dọkịta gị nyere iwu.
A na-eji okpukpu akpụkpọ anụ na-apụtaghị ìhè. Dọkịta gị nwere ike ịkọwa ihe abụọ ị ga-eme n'oge dị iche iche. I kwesiri ịkpachara anya iji ike zuru oke n'oge kwesịrị ekwesị dịka dọkịta gị gwara gị.
Kpochapụ capsules niile; unu ekewapu, che, ma obu kpoo ha.
Akwụsịtụ nkwupụta ụlọnga ga-akwadebe site n'aka onye na-ahụ maka ahụike gị ma nye gị ya na onye na-enye gị okwu. Chekwaa onye na-eziga ọnụ na refrjiraeto ruo mgbe ọ bụ oge maka ọgwụ gị; Otú ọ dị, ọ nwere ike ịchekwa ya na okpomọkụ dị elu ruo na 3 awa tupu ojiji. Mgbe njikere iji, wepụ okpu ahụ site na onye na-enye ihe tupu ị tinye ya n'ọnụ gị iji jiri nwayọọ gwọọ ọgwụ ahụ.
Naanị ihe na-eme iji gbochie ọgbụ na vomiting. Kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwererịrị mgbaàmà ndị a ma ghara ịmalite ịkwanye ntụ ntụ.
Mgbe a na-eji gbochie ọgbụ na vomiting kpatara ọrịa cancer, a na-ejikarị ntụ ntụ na-arụ ọrụ nanị n'oge 3 ụbọchị mbụ nke usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ chemotherapy. Akwụsịla ị na-ewere ntụ ntụ dị arọ karịa ka dọkịta gị gwara gị.
A: N'ebe ndị mmadụ na-ewere ngwongwo Aprepitant iji gbochie ọgbụ na vomiting kpatara chemotherapy, mmetụta kachasị emetụta gụnyere:
N'ebe ndị mmadụ na-ewere ntụ ọka Aprepitant iji gbochie ọgbụgbọ na vomiting mgbe a gwọchara ya, ihe kachasị emetụta bụ:
Nke a abụghị ndepụta zuru oke nke mmetụta mmetụta ọgwụ a. Jụọ onye dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ maka ozi ndị ọzọ.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịnwe mmetụta ọ bụla nke na-emekpa gị ahụ ma ọ bụ nke na-adịghị apụ.
Kpọọ dọkịta gị maka ndụmọdụ ahụike gbasara mmetụta dị iche iche.
B: Akwụsịghị ájá nwere ike ịkpata mmetụta dị njọ, gụnyere:
Mmeghachi omume na-adịghị njọ. Mmeghachi omume na-adịghị mma nwere ike ime na ntụ ọka na-adịghị mma ma nwee ike ịdị njọ. Kwụsị ịbịcha akpụkpọ anụ na-akpọ dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na i nwere nke ọ bụla n'ime ihe ịrịba ama ndị a ma ọ bụ ihe mgbaàmà nke mmeghachi omume nfụkasị:
nsogbu na-eku ume ma ọ bụ na-elo.
Mmeghachi omume akpụkpọ anụ siri ike nwere ike ịbịghị.
Ejila ntụ ọka na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị:
enwe ihe nfụkasị ọ bụla n'ime ihe ndị na-emepụta na ntụ ntụ
na-ewere ụfọdụ n'ime ọgwụ ndị a:
Iburu ntụ ntụ na ọgwụ ọ bụla n'ime ọgwụ ndị a nwere ike ịkpata nsogbu siri ike ma ọ bụ nsogbu egwu ndụ.
Akwụsịghị ájá bụ ọgwụ ọgwụ edere iji gbochie ọgbụgbọ na vomiting nke nwere ike ịda n'ime 24 awa mgbe ọ natara ọgwụgwọ chemotherapy. A na-ejikwa ya ọgwụ ndị ọzọ iji gbochie ọgbụgba ọgbụgba na vomiting na-egbu oge nke nwere ike ime ọtụtụ ụbọchị mgbe ị natara ọgwụ ọgwụ chemotherapy. A na-ejikwa ntụ ntụ eme ihe iji gbochie ọgbụ na vomiting kpatara ịwa ahụ. Akwụsịghị ájá bụ otu ìgwè ọgwụ ndị a na-akpọ antiemetics. Ọrụ ndị a site na igbochi ihe nke neurokinin, ihe dị n'ime ụbụrụ nke na-akpata ọgbụgbọ na vomiting.
Nri a na - abịa dị ka capsule na ọgwụ.
A na-eji ọnụ na-ejide capsule otu ugboro kwa ụbọchị, na-enweghị nri. Iji gbochie ọgbụ na vomiting n'ihi chemotherapy, ị ga - ewere 1 hour ngwa ngwa tupu ịmalite ọgwụ chemotherapy, mgbe ahụ kwa ụtụtụ maka ụbọchị 2 ọzọ. Iji gbochie ọgbụ na vomiting kpatara ịwa ahụ, a na-ewerekarị ntụ ntụ dịka otu dose n'ime 3 awa tupu amalite ịwa ahụ.
A na-enye ọgwụ ahụ ma na 1 ụbọchị na capsule nke a na-ewere n'ụbọchị 2 na 3 ma ọ bụ na e nyere ọgwụ ahụ na 1 ụbọchị ma ọ dịghị capsules na-ewere na ụbọchị ndị na-esote.
Mmetụta dị iche iche nke capsule gụnyere agụchi, itching, na ike ọgwụgwụ. Mmetụta ndị na-emekarị nke ọgwụ ahụ gụnyere hiccups, ike gwụrụ, na mgbanwe n'ime imeju nyocha ọbara. Ekwula ma ọ bụ rụọ ọrụ dị arọ ruo mgbe ị maara otú apịtị na-emetụta gị.
Na-enweghị Mbelata Ntụ ntụ
Na-enweghị ntụpọ powderMarketing
IV. Kedu otu esi zụta apịtị site na AASraw?